Maareeyaha Sare - Iskuulka ITS Tech
Hagaajinta Sare ee Sare
Tirada Boostada: 1
Goobaha: Koonfurta Hindiya
Suuqyada Sare Lagu Sameeyo Shaqaalaha Sare Shaqada:
Dhisida ganacsiga adoo aqoonsanaya iyo iibinta fursadaha.
Xidhiidhinta xiriirka macaamiisha.
Lacagaha Sare ee Sare Shaqooyinka Sare Shaqada:
Waxay kor u qaadaysaa guulaha shaqaalaha iyo kartida iyadoo la qorsheynayo bixinta xalalka; ka jawaabista su'aalaha farsamada iyo nidaamka xubnaha kooxda khibrad yar; barista hababka hagaajinta; xubnaha kooxda hagaajinta.
Aqoonsiga fursadaha ganacsiga adoo aqoonsanaya fursadaha iyo qiimeeynta jagadooda goobaha ganacsiga; baadhista iyo falanqaynta kala doorashooyinka iibka.
Waxay kashaqaysaa Tababarka Xallinta adoo abuuraya xiriirka iyo horumarinta cilaaqaadka leh rajooyin; ku talinta xalalka.
Waxay ilaalisaa xiriirka macaamiisha iyagoo siinaya taageero, macluumaad, iyo hagid; baadhista iyo soo jeedinta fursado cusub; waxay ku talineysaa horumarinta faa'iidada iyo adeegga.
Cadeeyaa hagaajinta nidaamka by hadda socda ee isbedelka warshadaha, hawlaha suuqa, iyo tartamayaasha.
Waxay diyaarisaa warbixinnada ururinta, falanqaynta, iyo soo koobidda macluumaadka.
Waxay ilaalisaa adeegga tayada iyadoo dhidibada iyo fulinta heerarka ururada.
Waxay ilaalisaa aqoonta xirfadeed iyo farsamo iyada oo ay ka qeybgalayso seminaaro waxbarasho; dib u eegista daabacaadyada xirfadleyda; sameynta shabakadaha shakhsiga ah; calaamadaynta hab-dhaqanka casriga; ka qaybqaadashada jaaliyadaha xirfadleyda.
Ka qaybqaado dadaalka kooxeed iyada oo la fulinayo natiijooyinka la xidhiidha sida loogu baahan yahay.
Xirfadaha Sare ee Sare ee Xirfadaha iyo Shahaadooyinka:
Shahaadada Bachelor-ka, MBA waa khasab
Ku adkeynaya heer sare,
Kulanka Hadafyada Sales Sales,